Maxay ka dhigan tahay lixdii gool ee ay Manchester City caawa kaga adkaatay Chelsea? – Gool FM
Maxay ka dhigan tahay lixdii gool ee ay Manchester City caawa kaga adkaatay Chelsea?
(Manchester) 10 Feb 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa soo dhoweysay naadiga Chelsea kulan ka tirsan horyaalka Premier League waxaana ay uga badisay 6-0.
Goolasha kooxda Blues looga adkaatay caawa saddex ka mid ah waxaa dhaliyey Sergio Aguero, labana waxaa saxiixay Raheem Sterling, halka goolka kale uu dhaliyey Ilkay Gundogan.
Haddaba waxaan halkaan hoose ku eegeynaa waxa ay ka dhigan tahay lixda gool ee ay caawa Manchester City uga badisay kooxda Chelsea:-
>- 0-6, kooxda Chelsea ayaa la kulantay guuldarradii ugu cusleyd tartan kasta tan iyo markii ay guuldarro 0-7 kala kulmeen Naadiga Nottingham Forest bishii April sanadkii 1991-kii.
>- Chelsea ayey caawa soo gaartay guuldarradii ugu cusleyd taariikhdeeda horyaalka Premier League.
>- Chelsea ayaa laga dhaliyey afar gool 25-daqiiqo ee furitaanka ciyaarta kulan horyaalka Premier League markii ugu horreysay taariikhda.
>- Kooxda Chelsea ayaa laga dhaliyey afar gool kulamo xiriir ah oo ay bannaanka ku soo dheeshay kulamada sare markii ugu horreysay tan iyo bishii December sanadkii 1990-kii.
>- Blues ayaa laga dhaliyey 4 gool iyo ka badan labo kulan oo isxiga oo ay bannaanka ku soo ciyaartay markii ugu horreysay taariikhdeeda horyaalka Premier League.
>- Kooxda Chelsea ayaa wajahaysa gool difaacashadii ugu xumeyd ee kulamada ay martida tahay horyaalka Premier League sanadkan 2019, waxaana saddexdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay bannaanka ku soo ciyaartay horyaalka laga dhaliyey 12 gool, iyadoo aan soo dhalin wax gool ah.
>- Goolhayaha Chelsea Kepa Arrizabalaga ayaa laga dhaliyey mid kasta oo ka mid ah siddeedii shuut ee bartimaameedka ahaa oo uu wajahay horyaalka Premier League sanadkan 2019 isagoo ku ciyaaraya meel ka baxsan garoonka kooxdiisa (Away).
Manchester City oo la wareegtay hogaanka Premier League, kadib markii ay si xun u xasuuqday kooxda Chelsea + SAWIRO
Ogoow waxa ay ka dhigan tahay SADDEXLEYDII uu Sergio Aguero caawa ka xareeyay kooxda Chelsea